U dir waxyaabahaaga iPhone-ka telefishanka adigoon haysan Apple TV | Wararka Gadget
Khamri Dila | | Sawir
Dhowr bilood ka hor waxaan idiinka sheekeeyay iMediaShare, oo ah codsi noo oggolaanaya inaan ku tusno sawirrada iyo fiidyowyada aannu ugu jecel nahay telefishankeenna Chromecast ama SmartTV. Maanta waxaan ka hadlaynaa codsi kale oo dhowaan lagu cusbooneysiiyay App Store: AllCast. Thanks to technology Apple AirPlay waxaan ku tusi karnaa tusmada qalabkeena Apple TV iyo qalabka Google Chromecast. Tani waxay naga caawin kartaa, tusaale ahaan, inaan gaarno ka daawo TV-ga khadka tooska ah Isbaanishka.
Haddii aadan qorsheyneynin inaad iibsato qalab noocan ah, laakiin Haddii aad jeclaan lahayd inaad ku soo bandhigto qalabkaaga gurigaaga Smart TV, waxaan adeegsan karnaa arjiga AllCast, oo aan si toos ah ugu soo diri karno TV-yada sawirada aan jecel nahay, fiidiyowyada iyo muusigga iyadoo aan loo baahnayn qalabkan.
AllCast waa la jaan qaadi karaa waa la jaan qaada inta badan TV-yada casriga ah ee jira hadda suuqa ku jira (LG, Sony, Samsung, Panasonic…), oo ay la socdaan Apple TV iyo Chromecast, waxay sidoo kale la jaan qaadi kartaa Amazon Fire TV, Roku, Xbox 360, Xbox One iyo WDTV. Sida haddii aysan taasi ku filnayn, AllCast sidoo kale waxay noo oggolaaneysaa inaan u dirno waxyaabaha aan ku kaydinnay Google +, Dropbox, Instagram iyo Google Drive ee TV-ga.
Laakiin isticmaalkeedu kuma koobna waxa ku jira iPhone-keena ama iPad-ka laakiin sidoo kale waxaan u soo diri karnaa waxyaabaha aan ku keydinay adeegeena mareegaha badan, Plex tusaale ahaan, TV-ga Smart-ka ah haddii aanu lahayn codsi u dhigma. Si loo adeegsado codsigan, TV-ga iyo iPad-ka waa inay ku xirnaadaan isla shabakadda Wi-Fi.
Markaan gujino fiidiyaha ama sawirka laga hadlayo, daaqad ayaa lagusoo bandhigi doonaa meesha qalabka aan dooneyno inaan ku soo saarno waa la soo bandhigi doonaa nuxurka, kaliya waa inaan riixnaa qalabka la xushay oo aan ku raaxeysanaa shaashadda weyn.
Wadada buuxda ee maqaalka: War gadget » Sawir iyo dhawaq » Sawir » Tuur waxyaabahaaga iPhone-ka ah TV-ga adigoon Apple TV haysan
Louis Arias dijo
In aan TV-ga Smart TV labadaba codsiyada la sheegay si fiican ayey u shaqeeyeen. Kiiskeyga, AllCast ma shaqeynin markii laga hadlayo in heesaha laga dhageysto taleefankayga telefishinkeyga, laakiin sida sawirada iyo fiidiyowyada, si habsami leh ayey ugu gudbisay .. haddii kale iMediaShare laakiin xitaa sidaas ayaan uga helay barnaamijkan si ka wanaagsan, maadaama uu ku jiro Waxaan ku soo saari karaa muusigeyga dhibaato la'aan iyo wax kasta oo kale oo isku mid ah.
Ujawaab Luis Arias
38 Kordhinta Chrome laga bilaabo 2014 ee aad sii wadi doontid isticmaalka sanadka 2015
Koodhka qiimo dhimista ee PlayStation Store hadda waa la heli karaa